Myanmar in Focus (51) Apply Myanmar in Focus filter
Ethnic Conflict in Myanmar (35) Apply Ethnic Conflict in Myanmar filter
Land Policy in Myanmar (20) Apply Land Policy in Myanmar filter
မြန်မာ့ရေးရာသုံးသပ်ချက် (8) Apply မြန်မာ့ရေးရာသုံးသပ်ချက် filter
Kachin (2) Apply Kachin filter
Belt and Road Initiative (BRI) (1) Apply Belt and Road Initiative (BRI) filter
Burmese (17) Apply Burmese filter
“ပထမတော့ သေနတ်နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ မြေတွေကို လုယူသွားခဲ့ကြတယ်။ အခုကျတော့ မြေလုဖို့ ဥပဒေကို အသုံးချလာပြန်ပြီ။"
မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူတွေဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တရား မျှတမှုမရှိတဲ့ဒဏ်ကို တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် ခါးစည်းခံခဲ့ကြရတယ်။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလည်း သန်းခေါင် ထက်ညနက်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့နေကြရတုန်းပါပဲ။
Position Paper: The Right to Land for IDPs and Refugees (English - 21 August 2019)(pdf, 176.99 KB)
Position Paper: The Right to Land for IDPs and Refugees (Burmese - 21 August 2019)(pdf, 300.37 KB)
အကျပ်အတည်းဆိုက်နေသော နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ တာဝန်ယူမှုရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်လျက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများသည်လည်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအရေးနိမ့်လျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံး-ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနှစ်ရပ်စလုံး- အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မအောင်မြင်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်လှသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်လိုလျှင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်များနှင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ပြည်သူများအကြားအားကောင်းရပေမည်။
“First they grabbed our land with guns; now they are using the law"
Displaced people in Myanmar have been suffering layer upon layer of injustice over the past decades. Today the situation is as bad as ever.
Transformation of an Entrenched Political System: The Need for International Responsibility in Myanmar
Political impasse continues in Myanmar. Peace talks and general elections have failed to achieve national breakthroughs. All parties — both domestic and international — need to reflect on this failure. Civil society networks and representative governance must be strengthened at the community level if peace and democracy are to be built.
Chronology on the Statue Case in Loikaw, Kayah State
In this commentary, the Union of Karenni State Youth and LAIN Technical Support Group provideachronology of events, outlining how arrests and the government’s handling of events have compounded rather than resolved political frustrations and inter-community understandings.
The Promise and The Statue
The construction of an Aung San statue has caused deep controversy in Kayah State during the past year. Dee De isamember of the Karenni State Farmers Union and Union of Karenni State Youth. He was arrested on 21 June, Karenni National Day, for his involvement in protests. In his commentary, Dee De argues why the construction of the statue is premature andasensitive issue for the Karenni and other ethnic nationality peoples at this time.
China's Belt & Road Initiative: A Cautionary Tale for the Kachins
A Memorandum of Understanding to establish the China Myanmar Economic Corridor (CMEC) was signed by the governments of Myanmar and China in September 2018. The CMEC forms part of China's Belt and Road Initiative (BRI),a21st century reimagining of the ancient Silk Road, the network of land and sea trade routes that once linked Imperial China with markets in the west.
မန်မာနိုင်ငံ၏ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အလားအလာ
ငြိမ်းချမ်းရေး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် လူထုလူတန်းစားများ၏ မြေ ယာရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို မဖြစ်မနေအကာအကွယ်ပေးရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုဆိတ်သုဉ်းလျက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရေး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အလုပ်မဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိအချိန်၌ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာဖြင့် တိုးတက်မှုဆိတ်သုဉ်းလျက်ရှိသည်။
Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar - Commentary Sai Wansai Burmese(pdf, 258.5 KB)
Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar - Commentary Sai Wansai(pdf, 419.31 KB)
Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar: Willaconditional clause help restore confidence in the 21st Century Panglong Conference?
The national peace negotiation process in Myanmar is not working, and it is currently facing stagnation.